AmaDrayivu Wokudla & Isikhwama - IGalveston County Food Bank
AmaDrayivu Okudla Nesikhwama
Isakhamuzi esi-1 kwezingu-6 saseGalveston County sibhekana nokungavikeleki kokudla nsuku zonke.
UNGENZA umehluko kumakhelwane odinga usizo.
Singatha iFood or Fund Drive!
Chofoza Lapha Ukulanda Iphakethe LeDrive & Fund Drive
Chofoza lapha ukuze ubuke uhlu lwethu lwamanje lwe-AmazonSmile Charity
Chofoza i-logo yethu ukulanda inguqulo ephezulu yesinqumo sezinto zakho zokumaketha
Joyina nathi ekuholeni impi yokuqeda indlala eGalveston County, ngoba akekho umuntu okufanele alambe.
Xhumana noJulie Morreale ku Julie@galvestoncountyfoodbank.org
Ama-FAQ AmaDrayivu Okudla
Ngubani ongabamba idrayivu yokudla?
Noma ngubani ofuna ukusiza ukuqeda indlala angabamba idrayivu yokudla. Abantu, imindeni, amaqembu, amakilabhu, izinhlangano, amasonto, amabhizinisi, izikole, njll.
Hlobo luni lwezinto olwamukelayo uma ushayela?
Samukela zonke izinhlobo zezinto zokudla ezingaboli ezingazinzi eshalofini futhi ezenzayo hhayi zidinga isiqandisi.
Izimpahla ezomile ezifana nelayisi, ubhontshisi, ipasta, okusanhlamvu, i-oatmeal, njll.
Izimpahla ezisemathinini ezinjengesobho, imifino, ituna, inkukhu, ubhontshisi, njll.
Izimpahla ezisemathinini zePop-top nezinto ezivulekile ezilula ziyaziswa kakhulu
Uyazamukela izinto ezingezona zokudla?
Yebo, samukela nezinto zokuhlanzeka ezifana nokuthi;
Yiziphi izinto ezingamukelwa?
izinto zokudla ezenziwe ekhaya
ukudla okonakalayo okufuna ifriji
izinto ezinamadethi aphelelwe yisikhathi
izinto ezifakiwe noma ezilimele.
Yiziphi izindlela ezinhle kakhulu zokubamba idrayivu yokudla?
Khetha umxhumanisi ozokwengamela idrayivu yokudla.
Khetha umgomo wokuthi ungathanda ukuqoqa ukudla okungakanani.
Khetha Izinsuku ongathanda ukusebenzisa idrayivu yakho yokudla.
Khetha Indawo Yakho yokuqoqa izinto, indawo enabantu abaningi evikelekile.
Bhalisa ne-GCFB ngokuthumela ifomu lokubamba iqhaza eligcwalisiwe le-Food & Fund Drive.
Thuthukisa iDrayivu Yakho ukwazisa abanye ngomcimbi wakho ngezincwadi, i-imeyili, amaflaya newebhusayithi.
Landa iphakethe le-Food & Fund Drive
Yiziphi ezinye izindlela zokuqhuba idrayivu yokudla?
Izinto Zokudla kwasekuseni: okusanhlamvu, i-oatmeal, amabha okusanhlamvu, ibhulakufesi elisheshayo, ukuxubana kwepancake, njll.
Izintandokazi Zezingane: amajusi, ibhotela lamantongomane, imigoqo yegranola, imakharoni noshizi, Chef Boyardee, okusanhlamvu
Isikhathi sedina: I-Pastas, i-Marinara sauce, inyama ekheniwe njengenkukhu noma i-tuna, "Ukudla-ebhokisini" okufana ne-Tuna Helper, i-Betty Crocker Helper Complete Meals, njll.
Isidlo Sasemini Esinsundu: Khuthaza iqembu lakho ukuthi lilethe isidlo sasemini esikhwameni esinsundu bese linikela ngemali ebelizoyisebenzisa ekuphumeni kwasemini.
Sebenzisa ukuncintisana okunobungane ukuze wenze iqembu lakho likhuthazeke ngokwengeziwe ukunikela. Dala amaqembu phakathi kwamakilasi, iminyango, amaqembu, phansi, njll. Ukubona ukuthi ngubani oqoqa ukudla okuningi. Qiniseka ukuthi “abawinile” bathola ukuqashelwa okukhethekile ngomnikelo wabo.
Buza ukuthi inkampani yakho ingafanisa yini nomnikelo wakho wokudla eGalveston County Food Bank ngokusetha inani ledola elinikelwe ngephawundi ngalinye lokudla okuqoqiwe. Xhumana noMnyango Wezabasebenzi wenkampani yakho mayelana nohlelo lokufaniswa kwezezimali.
Ngikukhangisa kanjani ukushayela kwami ​​kokudla?
Yabelana ngedrayivu yakho yokudla ngokusebenzisa imithombo yezokuxhumana, izincwadi zezindaba, izaziso, izimemezelo, amaflaya, ama-memos, ama-e-blast, namaphosta.
Kukhona uphawu oluphezulu lwe-GCFB olusemthethweni kuleli khasi olutholakalela ukulanda. Sicela ufake ilogo yethu kunoma yiziphi izinto zokumaketha ozenzela umcimbi wakho wokushayela ukudla. Ukuze uthole amathiphu amaningi ngokwakha izinto zokwazisa landa iphakethe leFood & Fund Drive.
Singathanda ukuxhasa umcimbi wakho! Qiniseka ukuthi wabelana nathi amaflaya wakho, ukuze sikwazi ukukhuthaza umcimbi wakho ezinkundleni zethu zokuxhumana.
Qiniseka ukusimaka ezinkundleni zokuxhumana!
Ukusakazwa kuyisihluthulelo sedrayivu ephumelelayo!
Ngiwuthathaphi umnikelo wami?
Zonke izinto ezinikelwayo ziyamukelwa endaweni yethu yokugcina izimpahla ese-624 4th Ave N, Texas City, TX. 77590. NgoMsombuluko - uLwesihlanu ngo-8 ekuseni kuya ku-3 ntambama.
Ngabe i-GCFB iyayilanda iminikelo?
Ukulandwa kokudla komnikelo kuba izindleko ezingavumelekile lapho sihlela ukuthathwa okuncane. Siyacela ukuthi uma inani lokudla eliqoqiwe lingaphansi kwalokho okunganela ngemuva kweloli eligcwele usayizi ogcwele, sicela ulethe endaweni yethu yokugcina izimpahla ku-624 4th Ave N, eTexas City, ngoMsombuluko - NgoLwesihlanu kusuka ngo-8 ekuseni kuya ku-3 ntambama. (Sicela ushayele ngaphambi kokulethwa ukwazisa abasebenzi) Ngeminikelo emikhulu, sicela uxhumane noJulie Morreale ku-409-945-4232.
I-Fund Drive FAQs
Yini i-fund drive?
I-fund drive yilapho uqoqa khona iminikelo yemali yesipho ebhange lokudla ukusiza ukuxhasa izinhlelo eziningi ezihlose ukuhlinzeka ngokudla kulabo abaswele.
Ingabe kungcono ukunikela ngemali kunokudla?
Kokubili imali nokudla kusiza kakhulu ukusekela inhloso yethu yokuhola impi yokuqeda indlala. Njengoba i-GCFB iyilungu le-Feeding America and Feeding Texas, amandla ethu okuthenga asivumela ukuthi sihlinzeke ngokudla okungu-4 ngayo yonke i- $ 1, okusinika amandla okuthenga ukudla okuningi kunabantu abangaya esitolo.
Ngabe imali ingaqoqwa kanjani ku-fund drive?
Imali ingaqoqwa njengokheshi, isheke noma i-inthanethi kwi-webstie yethu, www.alisacoliscom.
Okokheshi, uma abantu abanikeza ukheshi bengathanda ukuthola irisidi elidonselwa intela, sicela ufake amagama abo aphelele, ikheli leposi, i-imeyili kanye nenombolo yocingo nenani lemali.
Okwesheke, sicela ukhokhele eGalveston County Food Bank. Qaphela igama lenhlangano / leqembu lakho ngakwesokunxele kwesheke, ukuze umcimbi wakho uthole isikweletu. Bona iphakethe leFood & Fund Drive ngokwesibonelo.
Okwe-inthanethi, lapho ufaka iFood & Fund Drive yakho ephelele usitshele ukuthi ungathanda ukukhuthaza iminikelo eku-inthanethi futhi kungezwa ithebhu ekhethekile kwimenyu eyehlayo, ngakho-ke umcimbi wakho wokudla uzothola isikweletu ngomnikelo we-inthanethi oyimali.
Ngingaqala kanjani i-online fundraiser?
Kulula ukuqala i-online fundraiser ngokuvakashela ikhasi lethu le-JustGiving lapha . Yenza ikhasi ngendlela oyifisayo, uzibekele umgomo bese wabelana ngesixhumanisi ekhasini lakho le-online fundraising nge-imeyili noma ku-facebook naku-twitter ukusabalalisa igama.
Sicela uqiniseke ukusimaka ezinkundleni zokuxhumana.